Ogaden News Agency (ONA) – Ma runbaa in KT Zinawi meel uu geeyo la’yahay Cabdi ilay
Ma runbaa in KT Zinawi meel uu geeyo la’yahay Cabdi ilay
Laba aragti oo iska soo horjeeda ayay kala aaminsan yihiin dad aan kala xidhiidhnay Addisababa ilaa Jigjiga. Taxaaliisha ay samaynayeen dad aan wax ka weydiinay calaaqada u dhexeeysa KT Meles iyo Cabdi ilay waxay qayb ka mid ah saldhig uga dhigeen dhaqanka Meles ee ah inuusan jeclayn qofka diida xukunkiisa inuu sii noolaado in laynta iyo xasuuqa uu Cabdi ilay ku hayo dadka shacabka ah ee Ogadenyana uu ku helay Cabdi ilay mudnaan iyo madax salaax.
Waxayna daliil u soo qaateen in looga dhigay shahaado sharaf in lagu martiqaado shirweynaha ururka gacan ku-rimiska ah ee EPRDF.
Ra’yiga ka soo horjeeda kooxda aaminsan waxay leeyihiin KT Meles oo dunida ka gaday hawlgalkii Cobolle ka dib inuu ugu badnaan 2ba sano ku soo afjari doono halganka shacabka S.Ogadenya iyo jabhadda ONLF, mudadaana aan lagala hadlin xadgudubka iyo xasuuqa uu gaysto, wuxuu filayay in laynta iyo xasuuqa uu ku hayo Cabdi ilay shacabkaa uu ku soo afjari doono mudadii loo qabtay. Wuxuu hadda KT Meles u rahman yahay Cabdi ilay, wax walbana farahooda way ka bexeen aan ka ahayn beenta ay isku maaweeliyaan ee kolba la leeyahay waxaa yimid wafdi ka socda qurba joogta iyo reer hebel ayaa salaan iyo bogaadin u soo diray Cabdi ilay.
Dad badan oon kala xidhiidhnay Jigjiga waxay leeyihiin wax nidaam ah oo ka jira hadda waddanka ma jiro aan ka ahayn hawlgalada ciidamada JWXO ay sida hufan u fulinayaan iyo maxaysatada Cabdi ilay oo ka aargoosanaya shacabka reer guuraaga ah. Wuxuu ku dhex waashay bay yidhaahdeen Cabdi ilay teleefoonada ay uga soo dirayaan qurbaha kuwa doonaya inay maalmo ku soo qayilaan halkaa iyo weerarada kolba laga soo sheegayo meel ka mid ah agagaarka Jigjiga. Waxaa ku qaraxday beentii loo dhoodhoobay ee Ibraahim dheere iyo Salaax dambiile ay u sheegeen ka dibna uu ka sii qaaday. Waxaa ugu darnayd bay yidhaahdeen markii ciidamada gumaysiga la yidhi soo celiya teendhooyinkii iyo xeryihii ay ka oodeen meela ka mid ah dalka ee la yidhi waxaa ku soo xaroon doona ciidamada ONLF ee isa soo dhiibaya.
Nin ay saaxiiba yihiin Cabdi ilay ayaa yidhi; Beentii ay ku soo celcelinayeen oy rabeen inuu dadweynaha rumaysto ayay iyagii sheegayay run dhab ah moodeen. Markaasey kharash badan galiyeen xeryo la leeyahay waxaa dhaqan celin loogu samaynayaa ciidamada ONLF ee soo xaroonaya. Cabdi ilay iyo kooxdiisa hadda ma dhex tagi karaan ciidamada dawladda, wuxuuna dhex joogaa un maxaysatada hawaarinta oo shacabka uu ku ciqaabo markay diideen inay soo galaan xeryaha la ooday si loo yidhaahdo waa ciidamadii ONLF ee la sugayay.
Hadda oo dhamaan qawmiyadaha ku jira qabtolka Itobiya ay isu diyaarinayaan kacdoon Intifaada ah, waxaa laga saadaalinayaa inay soo dhawaatay mudadii uu sii hayn lahaa xukunka Wayanaha TPLF.